Sidee loo Nadiifiyaa Steamui.dll waa la Dhimay ama Looma Helin Khalad
Sidee loo Sameeyaa Steamui.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Khaladaadka Steamui.dll waxaa sababa xaalado keeni kara ka saarista ama musuqmaasuqa faylka DLL ee steamui.
Xaaladaha qaarkood, khaladaadka steamui.dll waxay muujin karaan dhibaatada diiwaanka , fayraska ama naceybka ama xitaa qaliin la'aan.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo khaladaadka steamui.dll ku muujin karaan kombiyuutarkaaga. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah siyaabaha caadiga ah ee laga yaabo inaad aragto qaladaalada fogaanui.dll:
Steamui.dll Looma Helin Codsigaan wuxuu ku guuldareystay inuu bilaabo, sababtoo ah steamui.dll lama helin. Dib u sameynta codsiga ayaa laga yaabaa inay xalliso dhibaatadan. Kama helin [PATH] \_ steamui.dll Qalabka lagu rakibay steamui.dll Faylka steamui.dll waa maqan yahay. Ma bilaabi karno [ARJIGA]. Qeybta loo baahan yahay waa la waayay: steamui.dll. Fadlan rakib [APPLICATION] mar kale.
Xayeysiisyada Steamui.dll ayaa laga yaabaa inay muuqdaan inta la isticmaalayo ama lagu rakibayo barnaamijyada qaarkood, marka Windows bilaabanto ama xirto, ama laga yaabee xitaa inta lagu jiro rakibidda Windows.
Xaaladda qaladka steamui.dll waa qayb muhiim ah oo macluumaad ah oo caawin doona inta lagu xallinayo dhibaatada.
Fariin qalad ah ee steamui.dll ayaa laga yaabaa inuu khuseeyo barnaamij kasta ama nidaam laga yaabo inuu isticmaalo faylka mid ka mid ah nidaamyada Microsoft ee ku jira Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , iyo Windows 2000.
Sida loo Xakameeyo Steamui.dll Khaladka
Muhiim: Ha ka soo degin steamui.dll bogga "DLL download". Waxaa jira sababo badan oo soo-ururinta DLL faylka waa fikrad xun . Haddii aad u baahan tahay nuqul ah steamui.dll, waxaa ugu fiican in laga helo asalka, asalka sharci.
Xusuusin: Ku bilaw Windows ee Mood nabdoon si aad u buuxiso mid ka mid ah tallaabooyinka soo socda haddii aadan awoodin inaad gasho Windows si caadi ah sababtoo ah qaladka steamui.dll.
Dib u soo noqo steamui.dll ka soo Wareegga Kutarka . Sababta ugu fudud ee suurtogalka ah ee faylka "missing" steamui.dll waa inaad si khalad ah u tirtirtay.
Haddii aad ka shakisan tahay inaad si khalad ah u tirtirtay steamui.dll laakiin aad horay u faaruqisay Dib-u-Isticmaalka Qashinka, waxaa laga yaabaa inaad dib u soo celiso steamui.dll barnaamijka dib u soo kabashada ee lacag la'aan ah .
Muhiim: Ka soo kabashada nuqul la tirtiray oo ah steamui.dll oo leh barnaamijka soo kabashada file waa fekir caqli ah oo kaliya haddii aad ku kalsoon tahay in aad naftaada ka tirtirtay faylkaaga iyo in ay si fiican u shaqaynaysay ka hor intaadan sidaa samayn.
Tirtir faylka steamui.dll ama faylka libswscale-3.dll si aad uhesho Steam si loo bedelo. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka saarto fayl loo yaqaan "beta."
Haddii mid ka mid ah faylasha DLL middani ay dhab ahaantii weli joogaan asalka aasaaska Buugga rakibidda (oo sida caadiga ah C: \_ Program Files (x86) \_ Steam \_ ) oo aan la tirtirin, isku day inaad iska tiriso steamui.dll ama libswscale-3 .dll file. Ka dib, fur furan si aad u cusbooneysiiso barnaamijka oo aad u bedesho faylka DLL oo leh mid cusub.
Haddii taasi aysan shaqayn ama haddii aad isticmaasho beta version of Steam, habka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu xalin karo qaladka DLL waxaa laga yaabaa inuu ka saaro C: \_ Faylasha (x86) \_ Steam / packet beta faylka.
Ogsoonow: Habkani inuu ka tirtiro faylka ama faylka kaliya ayaa ku caawin kara haddii faylka DLL uusan dhab ahaantii maqaneyn, laakiin kaliya maahan in lala xiriiro Biyaha hal sabab ama mid kale. Sidaas awgeed waa faa'iido leh haddii aad leedahay farriin khalad ah sida "Ku guuldareysiga in lagu dhameeyo steamui.dll," midna maaha mid muujinaya in faylka DLL uu maqan yahay .
Dib u cusbooneysii faylashaada Buuxda si aad u dayactirtaan faylasha musuqmaasuqa oo suurto gal ah in dib loo soo celiyo faylka steamui.dll dib u noqosho shaqo.
Uninstall ka dibna dib u soo celiso qaboojiyaha, adoo isticmaalaya tilmaamaha lagu bixiyo isku xirkaas. Mararka qaarkood, ka dib cusboonaysiinta Steam ama sabab kale oo ka mid ah, qalad ku saabsan faylka steamui.dll muuqan doono iyo dib u samaynta waa habka ugu wanaagsan ee aad u tagto.
Muhiim: Tijaabi sida ugu fiican ee aad u dhamaystiri lahayd tallaabadan. Dib-u-dhajinta Biyaha waa xalka ugu badan ee qalabka steamui.dll haddii saddexda fikradood ee kor ku xusan aysan la shaqeynin xaaladdaada.
Samee baaritaanka fayrus / nadaafad ee nidaamkaaga oo idil . Qaar ka mid ah khaladaadka steamui.dll waxay la xiriiri karaan fayruska ama infekshan kale oo khatarta ah ee kombiyuutarka kaasoo waxyeeleeyay faylka DLL.
Xitaa waxaa suurtogal ah in qaladka steamui.dll aad aragto ay la xiriirto barnaamijka colaadeed ee ku jira feylka sida faylka.
Isticmaal Nidaamka Dib-u-Celinta si aad u joojiso isbeddelka nidaamka dhawaanta Haddii aad ka shakisan tahay in qaladka steamui.dll ay sababtay isbedel loo sameeyay faylka ama qaabka muhiimka ah, Nidaamka Dib u-celinta ayaa xalin kara dhibaatada.
Ku cusbooneysii darawallada qalabyada qalabka ee laga yaabo inay la xiriiraan steamui.dll. Haddii, tusaale ahaan, waxaad helaysaa "faylka steamui.dll waa maqan yahay" qalad markaad cayaarto ciyaarta video, isku day inaad u cusbooneysiiso darawalada loogu talagalay kaadhkaaga codka iyo / ama kaadhka video .
Ku sii wad wadaha darawaladiisii ​​hore ee lagu rakibay haddii khaladaadka steamui.dll ay bilaabaan ka dib markii la cusbooneysiiyey darawal qalab hardware ah.
Tijaabi xasuustaada kadibna tijaabiso darawalkaaga adag . Waxaan ka tagnay inta badan qalabka xallinta dhibaatada tallaabada ugu dambeysa, laakiin xasuusta kombiyuutarka iyo darawalada adag waa sahlan tahay in la tijaabiyo waana qaybaha ugu caansan ee keeni kara khaladaadka dhameeya fayadhawrka ee ay ku dhacaan.
Isticmaal nadiifiyaha diiwaanka bilaashka ah si aad u hagaajisid arrimaha la xiriira steamui.dll ee diiwaanka. Barnaamijka nadiifinta diiwaanka bilaashka ah ayaa laga yaabaa inuu awoodo inuu kaa caawiyo adigoo ka tirtiraya unugyada diiwaangalinta steamui.dll ee aan sax ahayn oo keeni kara qaladka DLL.
Ku dhibaatee dhibaatada qalabka haddii khalad kasta ee steamui.dll ay sii socoto. Inkastoo ay suurtogal tahay in nadiifinta nadiifinta ee Windows ay caawin karto, waa lagama yaabo. Waqtigan xaadirka ah, dhibaatadu waxay u badan tahay in la xiriira qalabka la xiriira.
Sida loo Xaqiijiyo Msvcp110.dll waa la Dhimay ama Looma Helin Khalad
Sida loo Xaqiijiyo Mfc100u.dll Looma Helin ama La Dhimo
Sidee loo 'Faahfaahin' BOOTMGR waa la waayey 'qalad'
Sida loo Xaqiijiyo D3dx9_35.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sidee loo Sameeyaa Oleaut32.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sidee loo Xaqiijiyaa Dxgi.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Sidee loo Bixiyaa D3dx9_41.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sida loo Xaqiijiyo Msstdfmt.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Xadhkaha: Waxa ay yihiin
Maxay tahay sababta loo yaqaan 'Red X' ee Maamulaha Qalabka?
Waa maxay Hexadecimal?
The Elder Scrolls III: Cheat Morrowind iyo Codes
Anthem MRX "20-Tilmaamo" Heesaha Tiyaatarka ee Guriga - Tag Sarrey Dhameystiran
Doorashada ugu fiican ee DVR ee adiga kugu habboon
Xalinta dhibaatooyinka Web Design
Maxaa VPN kuugu qaban karo?
Cayaaraha 10aad ee Dhaqdhaqaaqa Dhaqan ee Wareegga ah waxaad ka ciyaari kartaa hadda
20ka Sawir ee ugu Fiican ee Lumiya laga bilaabo 2014
Maxay yihiin FH10 & FH11 Files?
Harman Kardon HKTS 20 5.1 Dib-u-Hadal bixiyaha Kala-hadal
18 Tilmaamaha Kaydinta Macluumaadka Bilaash ah
Abuuritaanka Qorshaha Daryeelka Macluumaadka SQL Server
Codso Muuqaalada Muuqaalka ee PowerPoint 2007
Raadinta Web Designer ah?
7da Gaadiidka ugu Fiican ee Gawaarida Laga Qaadanayo si loogu iibsado 2018 ee ka hooseeya $ 500
Epson's Expression Premium XP-630 Printer-ka-Mid-yar
WhatSize: Tom's Mac Software Pick
Sidee looga doodi karaa Facebook